प्रदिप र जसिता प्रेममा ?
गफगाफ- अभिनेत्री जसिता गुरुङ केहि समयको ग्याप पछि फेरी चलचित्र नगरीमा फर्किएकी छन् । चलचित्र लिलिबिलीमा अभिनय गरे पछि उनि केहि समय नगरीबाट केहि टाढा रहिन् । उनि टाढा चलचित्र नपाएरै भएकी हुन् वा आफ्नै काममा व्यस्त थिइन ? त्यो भने उनैलाई थाहा होला, खैर जे भए पनि उनि अब पुन चलचित्र नगरीमा फर्किएकी छन् त्यो पनि नयक प्रदिप खड्काकै जोडि बनेर । चलचित्र लिलिबिलीमा पनि यहि जोडीलाई दर्शकले मन पराएका थिए ।
त्यासोत प्रदिप र जसिता हाल एक अर्काको प्रेममा रहेको र प्रदिपलाई नसोधी जसित कुनै चलचिमा काम नगर्ने हल्ला चलचित्र नगरीमा व्यापक छ । चलचित्र ललिबिली प्रदर्शनको समयमा नै अभिनेता प्रदिप खड्का र अभिनेत्री जसिता गुरुङको प्रेम चर्चा सुरु भएको थियो । तर उनिहरु आफैले भने यो कुरा स्विकार गरि सकेका छैनन् । असोज ५ गतेबाट छायांकनमा जाने फिल्म लभ स्टेशनमा प्रदिप र जसिताको जोडी नै देखिन लागेको हो । लभ स्टोरी जनरा मै निर्माण हुन लागेको यो चलचित्रलाई उज्वल घिमिरेले निर्देशन गर्दैछन् । दार्ज्लिङ, सिक्किम लगायतका क्षत्रहरुमा मा यो चलचित्रको छायांकन हुनेछ । गोविन्द शाही र प्रदिपले मिलेर यो सिनेमा बनाउन लागेका हुन् ।